Risk of Smoking | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Risk of Smoking
Posted by Zaw Wonna on Oct 26, 2010 in News, World News |2comments
သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်တွင် ဆေးလိပ် အလွန်အမင်း သောက်သုံးခြင်းဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ခန့် ကြာမြင့်လာလျှင် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့် သူငယ်ပြန်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားရန် နှစ်ဆခန့် ပိုမိုနီးစပ်ကြောင်း သုတေသီတို့က ပြောကြားလိုက်သည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် ကင်ဆာနှင့် နှလုံးရောဂါတို့ ဖြစ်ပွားပြီး နှစ်စဉ် သေဆုံးသူ သန်းနှင့်ချီ၍ ရှိခဲ့သည်။
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါသည် သူငယ်ပြန်ခြင်း ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပြီး လူတို့အနေဖြင့် မှတ်ဥာဏ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပျောက်ဆုံးပြီး မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း ကင်းမဲ့သည့် ဦးနှောက် ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတဝန်းတွင် ထိုရောဂါ ခံစားနေရသူပေါင်း ၂၆ သန်းခန့် ရှိသည်။
ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးနှင့် သက်ဆိုင်သော နှလုံးထိခိုက်မှုများကြောင့် နှစ်စဉ် လူပေါင်း ၅ သန်းခန့် သေဆုံးနေရကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကိုယ်တိုင် ဆေးလိပ်မသောက်သော်လည်း ဆေးလိပ်ငွေ့ ရှုရှိုက်ရမှုကြောင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၄၃၀၀၀၀ ခန့် နှစ်စဉ် သေဆုံးခဲ့သည်။
Smoking doubles dementia risk in late life – study
ဆေးလိပ်မကောင်းကြောင်းတွေ ဖိတ်မိ၊ကြားမိတဲ့နေ့ ဆိုရင်တော့
ကိုယ်လဲ ကြောက်လန့် ပြီး ဖျက်မယ်ဖျက်မယ် ဆိုပြီး ကြိုးစားကြည့်တာပါပဲ..
ရှိသမျှဆေးလိပ်တွေ သူများကို အကုန်တိုက်ပစ်…၊ဒါကုန်ရင်တော့ သောက်တော့ဘူး ဆိုပြီးရှိတာလေးကုန်အောင်သောက်ပြီးအိမ်ပြန်.
ဒီနေ့ တော စဖျက် ပြီပေါ့….ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ် ဟုတ်လို့ ..
အိမ်လဲရောက် ရေမိုးချိုး၊စားသောက်ပြီးတော့ အချိန်လဲတန်ကော…မနေနိုင်တော့ဘူးဗျာ
လမ်းထဲက ရှိတဲ့ ဆိုင်တွေလျှောက်နှိုးပြီး စီးကရက်လေးတွေ ပြန်ဝယ်ရတာပါပဲ…
စိတ်ပဲ မပြတ်သားလို့ လား..
ကိုယ်တိုင်ပဲ ဒုက္ခ မရောက်သေးလို့ လား မသိ
ခုထိ တော့ မဖျက်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်
မြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်. .. ဥပဒေပြုသူတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဗျ..။
ဆေးလိပ်ထုတ်သူ၊ ၀ယ်သူ၊ ရောင်းသူ၊ သုံးစွဲသူတွေကိုအခွန်လေးလေးပင်ပင်ကောက်ရမှာ..။
ဆေးပြင်းလိပ်၊ဆေးပေါ့လိပ်ဆိုတာကြီးတွေ မြန်မာ့ရိုးရာလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့..မြန်မာပြည်မှာ ဈေးကွက်ဗရမ်းဗတာရှိနေတာကလည်းဆိုးတယ်.။
ဟိုမှာမသောက်ရ..ဒီနားမသောက်ရ.၊ ဈေးထဲမသောက်ရ။ ရုံးထဲမသောက်ရ။ လူစုလူဝေးနားမသောက်၇… ကန့်သတ်တာတွေလုပ်ရမှာ..
အဲဒီလိုနဲ့.. သောက်တဲ့သူတော်တော်များများ ..အလိုလိုကို … ဆေးလိပ်ပြတ်ရော..။